आजको राशिफल : ज्येष्ठ २० गते सोमबार, भगवानले सबैको रक्षा गरून् !
आजको राशिफल / वि.सं. २०७६ ज्येष्ठ २० गते सोमबार
सन्तति र भाइबहिनीका समस्यामा केन्द्रित हुनुपर्छ । सामाजिक कामबाट जस पाउन सकिंदैन । सँगीसाथीको सहयोग र सद्भाव प्राप्त नहुनाले निराशा बढ्न सक्छ । कडा मिहिनेत र परिश्रमका बाबजुद प्रतिफल सोचेजस्तो नहुनसक्छ । धेरै आशावादी हुनु हुँदैन । पाँचौं भावको चन्द्रमा बलियो छैन, त्यसैले मिश्रित प्रभाव भएको दिन छ । यद्यपि पुरानो समस्यालाई निराकरण गरी अघि बढ्न प्रेरणा प्राप्त हुनेछ । कीर्तिमानी काम गर्ने र प्रतिष्ठा कमाउने बेला छ । त्यसैले आत्मबल र हिम्मतले काम गर्दा आँटेका काम पनि सजिलै सम्पादन हुनेछन् । उद्योग तथा व्यापारमा सामान्य फाइदा नै मिल्नेछ ।